Ismaaciil Mire Cilmi (Af Ingiriis : Ismail Mire Elmi) madax wuxuu ka ahaa guutada Shiikhyaale. Wuxuu ku dhashay Lasadar, tuulo u dhow Buuhoodle qiyaastii 1862, geeriyooday 1950; wuxuu ahaa gabayaa, halabuur, hogaamiye iyo dagaalyahan Soomaaliyeed kaasi oo ka tirsanaa hogaanka sare Ciidankii Daraawiishta. Ismaaciil Mire waxaa lagu xasuustaa gabayo badan oo dhaxalgal ah kuwaasi oo ka mid ah Suugaanta Soomaalida.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ismaaciil_Mire&oldid=227554"
Last edited on 1 Jannaayo 2022, at 12:24
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Jannaayo 2022, marka ee eheed 12:24.